Loopfuse: B2B Ahịa akpaaka maka SMBs | Martech Zone
Loopfuse: B2B Ahịa akpaaka maka SMBs
Tuesday, October 8, 2013 Monday, October 7, 2013 Douglas Karr
LoopFuse na-enye azụmaahịa azụmaahịa azụmaahịa (B2B) azụmaahịa na-agwa gị onye na-eleta weebụsaịtị gị, na-enyere gị aka ijide ozi ha, na-eziga ozi ịntanetị na-azụlite, na-enweta ohere kacha mma, ma na-etinye ya niile n'ime usoro Njikọ Mmekọrịta Ndị Ahịa (CRM) ya akụkọ dị elu.
N'otu oge, ị ga-ahụ nduzi ndị tozuru etozu, usoro ịgba ahịa dị mkpụmkpụ, ịbawanye ahịa na ire ere, yana akpaaka nke ọrụ aka na ugboro ugboro. Na nkenke, anyị na-enyere gị aka ịmepụta ngwa ngwa. LoopFuse OneView Atụmatụ Isi:
Ogwe ahia - Dashboard na-enye ezigbo oge, nlele nkeji na ọrụ gị niile na ahịa na ahịa, ruo na nkọwa zuru oke na ntụpọ aka na atụmanya, ụlọ ọrụ, CRM Leads, na CRM Ndi ana-akpo. Site Email Marketing mepee ma pịa ọnụọgụ, na ọnụọgụ nke Leads kere kwa elekere n'ime CRM gị, dashboards ha niile.
email Marketing - Ike ike Imekọrịta Email nke OneView na-enyere gị aka ịmepụta ọmarịcha ozi ịntanetị, ahaziri gị na ozi kọntaktị nnata. Dị ike nchịkọta na akuko na-enyere gi aka ime ezi ihe nke oma i na eme mkpọsa email gi.
Inbound Marketing - Nyochaa ma soro engines ọchụchọ, isiokwu, na-ezo aka na saịtị na okporo ụzọ na-eru saịtị gị. Chọpụta ụdị ahịa azụmaahịa ọdịnaya na akụ dị oke ọnụ ahịa maka ndị ọbịa na ndị na-agụ saịtị gị.
Ndota Ndu - Ahịa akpaaka na-amalite site na Onye ndu. Leaddị Nweta Capture na-ejikọta nke ọma na ụdị weebụsaịtị gị ugbu a, na-enye gị ohere ịmezi usoro nke ijide, nsị (na CRM gị), na iru eru.
Idu Nurturing - Duru Nurturing n'ụzọ zuru ezu automates usoro nke iru eru atụmanya na-eduga ma ọ bụ na-edebe gị ẹdude ahịa 'ntị. Nduzi Nurturing nke OneView nwere ike inyocha nyocha ọ bụla na otu atụmanya; ọrụ webụsaịtị, ozi kọntaktị, ọrụ email, na ọbụlagodi ezigbo oge ijikọ na CRM gị.
Mmekọrịta CRM - Njikọ ọnụ ụzọ abụọ na CRM gị na-enye usoro akpaghị aka maka ijide, iru eru, ịtụgharị, na ịlele Ndị isi, Ndi ana-akpo, na Ohere. Ihe mgbakwunye ndị ọzọ na-eme ka njikọ CRM ha dịkwuo elu, na-enye ndị ọrụ ahịa ezigbo ozi gbasara ọ bụla Lead.
Ndu isi - LoopFuse OneView na - enye ndị na - ere ahịa ohere imepụta iwu ndị na - eduzi akara ngwa ngwa site na iji ndị mgbaasị na - ebute ụzọ. Enweghị koodu nzuzo dị mgbagwoju anya, ma ọ bụ ihe siri ike ịchọpụta syntax, yabụ ndị na-ere ahịa nwere ike ịbanye ma debe iwu ngwa ngwa.
Ndu Ndu - Site na nyochaa mmemme ndị ọbịa niile na ịdebanye ozi ndebanye aha, anyị na-enye ndị na-ere ahịa ike ka ha kee ha ụzọ dị iche iche nwere njirimara ma ọ bụ profaịlụ ọrụ. Site na mmemme akpaaka, òtù nwere ike ijikwa azịza nke ọma site na atụmanya ma na-elekwasị anya na ahịa ahịa na atụmanya kachasị elu.
Akụkọ Mgbasa Ozi - Akụkọ miri emi emere iji nyere ndị na-ere ahịa aka iji guzobe nghọta dị omimi nye ọgbọ ndu ha, ijide ya na usoro ntozu ya. Usoro nchịkọta akụkọ na-ekpuchi akụkụ ọ bụla nke ahịa n'ofe nchekwa data gị, gụnyere: atụmanya, weebụsaịtị nchịkọta, ileta ụlọ ọrụ, arụmọrụ email, na ọrụ CRM.
Ahịa na-elekọta mmadụ - Social media bụ nnukwu ụzọ iji chọpụta ma jikọọ na atụmanya. Akụkụ aghụghọ bụ ịkewa mgbaàmà site na mkpọtụ iji chọta ohere kachasị mma. Nearstream dị ọhụụ ma nyere gị aka ịchọta akara ngosi.
Ngwakọta nke Onye-atọ - LoopFuse OneView na ejikọkọta nke ọma na sistemụ njikwa ọdịnaya ndị ama ama, tebụl enyemaka, CRMs, na Akwụkwọ ndekọ aha azụmaahịa nke atọ, naanị ịkpọ aha ole na ole.
API OneView - LoopFuse na-enye Webservice API maka ịghachite na ịtinye ozi na / site na akaụntụ LoopFuse OneView gị na ndokwa. Ebe ọ bụ na e wuru Usernye-Interface anyị niile na Webservice API, imirikiti arụmọrụ dị n'etiti onye ọrụ-interface bụ ihe ga-enyere gị aka ịmekọrịta.
Tags: APImwekota crmDrupalemail Marketinginbound marketingndu ndundu ndundu nurturingndu akaraloopfuseloopfuse otu nleleahịa akpaaka n'elu ikpo okwuahia ahia ahiaahịa ahịanyochandị ahịaahịa mmadụWordPressOnyebuchi
Ntughari N'ime igbe
Congha Falcon: Social Media Management maka Enterprise